Ukubaluleka Kokubambisana Kwabathengisi Ku-Lockdown | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 27, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 27, 2020 UTunio Zafer
Ucwaningo lwabathengisi kanye nabaphathi abakhulu ehlobo luthole ukuthi amaphesenti ayisihlanu kuphela awatholanga okuhle empilweni nge-lockdown - futhi akekho noyedwa umuntu owathi bahlulekile ukufunda okuthile ngaleso sikhathi.
Futhi ngokubonakalayo ukubophela isidingo somsebenzi wokumaketha ngemuva kokuvalwa kwentwasahlobo, kunjalo futhi.
Ukuze i-xPlora, inkampani yokumaketha neyedijithali ezinze eSofia, eBulgaria, ikhono lokwabelana ngamafayela wokuklama nezinye izimpahla ezibukwayo nabasebenzi namathemba okubonakalise kubalulekile.
Ukuba yi-ejensi yedijithali, ukuphepha, nokufinyelela kwe-24/7 kumafa okubukwayo kubalulekile eqenjini lethu. I-pCloud ihambisana ngokugcwele nezidingo zokuphepha esizisebenzisile ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu asekhaya nakwamanye amazwe.
UGeorgi Malchev, xPlora Ukuphatha Uzakwethu
Ithimba le-xPlora manje selisebenzisa pCloud, enye yezindawo zokugcina amafu ezikhula ngokushesha kakhulu eYurophu nezindawo zokwabelana ngamafayela. Ngamakhasimende aphesheya, ukukhiywa phansi kunikeze inselelo ethile.
Kepha amaqembu wokumaketha kufanele abelane kanjani ngamafayela abalulekile - futhi ajwayele ukuba makhulu - ukuze asebenze ngamandla amakhulu emhlabeni lapho iCovid-19 iqhubeka nokwenza umonakalo omkhulu? Kunemithetho emithathu yegolide yokugcina ukuqhubeka kwebhizinisi ngenkathi yamukela ukusebenza okukude ne-hybrid:
Ukuhlala uxhunyiwe futhi usebenza ngokubambisana nozakwethu abavela ekhaya kungaba nzima, futhi izinto ezake zaba lula njengokukhombisana imibhalo yomsebenzi, zaba ngumsebenzi onzima kakhulu. Amandla okusebenza ngokubambisana kumadokhumenti, okubukwayo kanye namafayela alalelwayo kalula njengoba ubungenza ngaphakathi kwendawo yehhovisi kuyisihluthulelo sempumelelo.
Emhlabeni Ama-60% omphakathi waseBrithani abesebenza ekhaya kusukela ukuvalwa kwe-coronavirus, ngama-26% anquma ukuqhubeka nokusebenza evela ekhaya ngezikhathi ezithile, uma kuphephile ukwenza njalo. Noma ngabe ukubuyiswa okujwayelekile kubuye kube khona isidingo sokuhlala sixhumene nozakwabo abangekho ehhovisi njalo futhi banqume ukusebenza ngezikhathi ezithile ekhaya. Kuba kubalulekile ukuba namathuluzi wokusebenzisana afanele wonke umuntu onawo.
Gxila Kokuphepha Kwefayela
Kubalulekile kulezi zikhathi ezingaqinisekile ukuthi wonke umuntu azizwe ezwa ukuphepha lapho esebenzisana nemibhalo. Lokhu kufaka phakathi ukunikeza amakhasimende isiqiniseko kanye nabasebenzi. Ukuphepha kwamabanga ezempi kuphela okuvumela ukuthula kwengqondo kwangempela nokuqinisekiswa, ngakho-ke kubalulekile ukuthi abaninimabhizinisi nalabo abangena kubuchwepheshe obusha benze umsebenzi wabo wesikole. Ngo- pCloud, besifuna futhi ukuqhubekela phambili futhi sivumele abasebenzisi banqume ukuthi bangathanda yini ukugcina imininingwane yabo eYurophu noma e-United States, ibavumele ukuthi bahlele lapho amafayela abo agcinwa khona ngokuya ngokuthanda kwabo.
Ukusetshenziswa kalula mhlawumbe yisidingo esikhulu sabahlinzeki besitoreji samafu. Okudingwa ngamabhizinisi kungenye yezinhlelo nezinqubo eziyinkimbinkimbi okufanele zifunde. Isixazululo esifanele onke amakhono sibaluleke kakhulu.
Kubikezelwa ukuthi ngasekupheleni kuka-2020, I-83% yemithwalo yemisebenzi izoba semafini, kugqamisa kuphela ukubaluleka kokuhlala uxhumekile lapho wabelana ngemibono futhi wenza amasu wokumaketha, nokwakha indawo yokusebenza ngokubambisana Kuma-ejensi wokumaketha, iCovid-19 inikeze ithuba lokuthola izinhlelo nezinqubo ezifanele zokuhlangabezana 'nekusasa lomsebenzi'. Kuyithuba abangenakukwazi ukuligeja.
Tags: ukwabelana ngefayelaukusebenzisana kwezentengisopcloudukusebenzisana okukudeumsebenzi wokudeabasebenza kude
UTunio Zafer uyi-CEO ye-pCloud AG - inkampani ethuthukisa futhi enikeze ngeplatifomu yokugcina i-pCloud. Unesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-18 sokuphatha nokumaketha emkhakheni wezobuchwepheshe, futhi ubambe iqhaza ezinhlelweni eziningi zebhizinisi eziphumelele njengeMTelekom, iHost.bg, iGrabo.bg, iMobile Innovations JSC neminye. Njengomholi nomphathi wenkampani yokugcina amafu, uTunio ukhuthaza ukwenziwa okusha ezindaweni ezinjengokuphepha nokusebenza kahle kwezindleko ukuqeda abasebenzisi. UTunio ukhuthaza ukucabanga phambili kulo lonke iqembu lakhe, esebenzela ukwenza umthelela omkhulu emakethe ye-IT ekhula ngokushesha, kubantu ngabanye nakwamabhizinisi ngokufanayo.